NY MASON’NY FAHITANA · L'Homme, son aura et son évolution
> NY FANAHY NO OLONA
> NY MASON’NY FAHITANA
Classé dans : — cyrius @ 10:35
Mikolokolo ny tsindrimandry » intuition » sy ny fahitana na » vision « .
Mampitombo ny hakingan-tsaina na quotient intellectuel.
FAHEFAN’NY MASON’NY MPAHITA
Tsy vitsy ny olona manana tsindrimandry, mety ho anisany ianao.
Ireo olona manana vintana rano toy ny cancer, scorpion, ary ny poisson.
Matetika ny nofinao no milaza zavatra tena hitranga tokoa, tahaka ny an’i Josefa, zanak’i Jakoba ao amin’ny baiboly.
Misy amin’ny mpianatra koa manofy ny laza adina hitranga any amin’ny fanadinana, nofy izany, hoy ianao.
Manomboka amin’ny fotoana hampiasanao an’ity mason’ny mpahita ity kosa, tadidio tsara izay laza adina izay, ary aza avela ho tsy ho hainao.
Akaiky tokoa izao ny fanadinana, tombony ho anao ny manana an’ity mason’ny mpahita ity.
Nisy mihitsy moa andiana mpanao yoga tao amina foibe fampianarana yoga iray malaza ho mpahita laza adina rehefa akaiky ny fanadinana, tamin’ny fotoan’androny, mora noho ny teknika rehetra fampiasan’ny mpanao yoga moa ity mason’ny mpahita ity.
NAHOANA NO MANANA FAHEFANA NY MASON’NY MPAHITA ?
Manana fahefana izy, satria misy fiantraikany amin’ny saina izay rehetra jinerin’ny tena.
Ny mason’ny mpampiasa azy no tena tompon’ny fahefana, fa mpanampy tosika fotsiny ny mason’ny mpahita.
» voir c’est savoir » na mahita mira mahalala hoy ny fitenenana.
Mibahan-toerana eto ny loko izay manana ny fahefany tokoa, Tsy haka lavitra isika fa misy tokoa ny loko manambina sy tsy manambina, manana ny heriny izany ny loko, ary manaiky an’izany ny mpahay siansa, manaiky izany ny » astrologue « , manaiky izany koa ny biby, ny fiovan’ny lokony ohatra no isarihan’ny voromanidina lahy ny vavy hiaraka amin’ny vanim-potoana fampitomboan-taranaka.
NY MOMBA AN’ITY MASON’NY MPAHITA ITY
Sary miovaova loko : » gif animé » .
Nataona mpahay sary (Infographiste) sady mpanao yoga ny mason’ny mpahita.
Mba hahatsotra ny fampiasana azy no nanaovana azy an-tsary.
Ny fiovaovan’ny lokony moa natao hanamora ny fifantohana ho an’ny rehetra.
AHOANA NO HAHAZOANAO NY MASON’NY MPAHITA ?
Alefaso amin’ny Mvola 034 04 716 78 na ao ato, alefaso SMS ny adiresy mailaka-naom na adiresy facebook, dia homena anao ny mason’ny mpahita.
a – amin’ny lokony izay tianao
b – amin’ny loko manambina anao
c – amin’ny lokony mifanaraka amin’ny ora sy ny daty nahaterahanao.
Misy fandraisana anjara kely ity tolotra ity.
FAMPIASANA NY MASON’NY MPAHITA
Ny maso ihany no miasa eto ka :
1 – Sokafy ny sary
2 – Makà toerana eo amin’izay ahazoanao aina tsara ka ahafahanao mahita azy tanteraka miaraka amin’ny fiovaovan’ny lokony.
3 – Afantohy eo amin’ny sary ny masonao, jereo tsara ny fiovaovan’ny lokony mandritry ny minitra vitsy.
4 – Ny famerimberenanao ny fanazarantena isan’andro no hahazoanao vokatra haingana sy maharitra kokoa.
Ho an’ny alchimiste moa, ao amin’ny hazavana no misy ny fahefana matanjaka indrindra.
Aoka ary ho fantatrao fa hazavana ny loko.
Natambatra ao amin’ny mason’ny mpahita ny hery hampatanjaka ny saina sy hampivelatra ny don maha-mpahita anao.
Tsy misy ifandarisany mivantana amin’ny lahatsoratra aloha ity dessin animé amin’ny fiteny malagasy ity fa atolotro hotsidihinao fotsiny :
- loko manambina
- vato manambina
- vintana mifanaraka
- horoscope afaka mifanaraka
- vintana manambina